NEWS COLLECTION: July 2009
အာဏာပိုင်များက အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များကို အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား
ဖြိုးကြီး Friday, 31 July 2009
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များကို အာဏာပိုင်များက အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ခေါ်ဆောင်သွားသဖြင့် မိသားစုဝင်များ စိုးရိမ်ပူပန်နေလျှက်ရှိသည်။
မကွေးတိုင်း၊ အောင်လံမြို့မှ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ဦးအေးမြင့်နှင့် ကိုမင်းမောင်တို့ကို ယမန်နေ့ ည (၁) နာရီခန့်က မြို့နယ်ရဲမှူး ဦးစိုးသန်း ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့က ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိသားစုနှင့်နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
“မိသားစုတွေကို ဘာမှတော့ ပြောမသွားဘူး၊ ည (၁) နာရီလောက်က ဧည့်စာရင်းစစ်သလိုနဲ့ လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်သွားတယ်၊ ခေါ်သွားသူရဲ့နာမည်တွေ မှတ်ထားတာရှိတယ်၊ ကိုမင်းမောင်ရဲ့ အမျိုးသမီးက ခေါ်သွားတဲ့အကြောင်း လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတော့ သူတို့က လက်မှတ်မထိုးပေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
ကိုမင်းမောင်ကို လာရောက်ခေါ်ဆောင်စဉ်က မြို့နယ်မှူး ဦးစိုးသန်း၊ ဒုရဲအုပ် ကျော်ထူးနှင့် အင်အား ၁၀ ယောက်ခန့် ပါဝင်ပြီး ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မိသားစုဝင်များက သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း အခြေအနေ တစုံတရာမသိခဲ့ရကြောင်း ဆက်ပြောသည်။
“ဒီမနက်ရော၊ နေ့လည်ကရော သွားမေးတော့ စခန်းမှာမရှိဘူး ပြောတယ်၊ ဘယ်မှာထားလဲ ဆိုတော့လည်း မသိဘူးပြောတယ်၊ စခန်းမှူးကို မေးတော့လည်း မရှိဘူး၊ နေပြည်တော်အစည်းအဝေးသွားတယ်လို့ပဲ ပြောတယ်၊ အခုချိန်ထိ ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာ မသိရသေးဘူး” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ထို့အပြင် ရေနံချောင်းမြို့မှ ဦးမြင့်ဝေ၊ ဦးတင့်လွင်၊ ဦးသန်းအောင်၊ ကိုခင်ဝင်း၊ တောင်တွင်းကြီးမှ ဦးစိုး၊ ကိုပါလေး၊ ကိုကျော်နိုင်၊ မြို့သစ်မှ ဦးသာအောင် (လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဇင်မမထွန်း၊ ဦးသန်းမြင့်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မှ ကိုထိန်ဝင်း၊ မခင်ဝင်းကြည်၊ မင်းဘူး စကုမှ ဦးသောင်းစိုး၊ နေမျိုးကျော်၊ ပွင့်ဖြူမြို့မှ ကိုအောင်တင်လင်း၊ ကိုအောင်ဝင်း၊ ဒေါပုံမှ ကိုနေလင်းကျော်၊ သာကေတမှ ကိုနေလင်းစိုး၊ ဒေါ်နော်အုံးလှ၊ စမ်းချောင်းမှ ဦးညွန့်လှိုင်၊ ပခုက္ကူမှ ဦးပိုက်ကို၊ ကိုကျော်မြင့်အေး၊ ကိုဌေးဝင်း တို့ကိုလည်း ယမန်နေ့ ညပိုင်းက အာဏာပိုင်များ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ဗထူး Friday, 31 July 2009
ယနေ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စီရင်ချက်ချမည်ဆိုသည့်အတွက် ထောင်ဂဏန်းနီးပါး ပြည်သူ လူထု တို့သည် အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်း အင်းစိန်ထောင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြန့်ကြက်လာရောက်ကြကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံ တဦးက ပြောသည်။
ပြည်သူများနှင့်အတူ သံဃာများလည်း ပါဝင်ကြကြောင်း အင်းစိန်ပန်းခြံအနီး နေသူတဦးက ပြောသည်။
“ဘုန်းကြီးတွေ ကျနော်တို့ဆိုင်မှာ လာထိုင်နေကြတယ်။ သူတို့မှာ ဖုန်းလည်း ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေက သူများတွေဆိုင်မှာလည်း ရှိတယ်ခင်ဗျ။ ကြည့်ရတာ အုပ်စုခွဲထားတာနဲ့တူတယ်” ဟု အင်းစိန်ပန်းခြံအနီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှင်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့အနှံ့နှင့် လှည်းတန်းမီးပွိုင့်တို့တွင် ယနေ့ လုံခြုံရေး တင်းကျပ်လျက်ရှိပြီး အင်းစိန်ပန်းခြံထောင့်တွင် ၀တ်စုံ အပြည့်ရဲများပါဝင်သည့် ရဲကား (၆) စီးက အသင့်နေရာယူထားသည်။
“ကျနော်တို့က တာဝန်ကျတဲ့သူတွေပါ။ အမိန့်တော့ပေးထားပါတယ်။ ဆန္ဒလာပြတဲ့ သူတွေ၊ စာရွက်ဝေတဲ့ သူတွေ၊ အဲဒါမျိုးတွေ ကို တွေ့တာနဲ့မစစ်ဆေးဘဲ ဖမ်းဆီးရမှာပါ” ဟု အင်းစိန် ပန်းခြံထောင့်ရှိ တာဝန်ကျ ရဲတဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
အင်းစိန်ခုံးကျော်တံတားသို့ မည်သူတဦးတယောက်မျှ မသွားရဟု အမိန့်ထုတ်ထားကာ ယနေ့တွင် အဆိုပါခုံးတံတား၌ ရဲများနေရာချထားရာ ယနေ့တွင် အမျိုးသမီးရဲအရာရှိများပါ နေရာယူ စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
“စွမ်းအားရှင်တွေရဲ့ မိသားစုတွေကိုပါ ပြည်သူတွေကြားထဲမှာ နေရာချထားတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အသက် (၅၀) ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီးတွေ ပါတယ်” ဟု မျက်မြင်တွေ့ကြုံခဲ့သူများက ပြောသည်။
အင်းစိန်ပေါက်တောဝ မီးပွိုင့်အနီးတွင်လည်း စွမ်းအားရှင်နှင့် ကြံ့ဖွံ့များစွာရှိနေပြီး အမိန့်ချသည့် အစီအစဉ် ပြီးဆုံးသည်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြသော ပြည်သူကြားသို့ လာရောက်လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေကြောင်း ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့သူတဦးက ပြောသည်။
သံရုံးကားများ အစီအရီ ပြန်ထွက်လာသည့်အခါ စောင့်ဆိုင်းနေကြသော ပြည်သူတို့က ပေါက်တောဝမီးပွိုင့်တွင် စုရုံးသွားကြကာ မည်သို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်ကို သိချင်ဇောဖြင့် နားစွင့်နေခဲ့ကြပြီး အမှုကို သြဂုတ်လ (၁၁) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်ဟု သိရသည့်အတွက် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တို့အား စီရင် ချက်ချ မည့်ရက် ကို သြဂုတ် (၁၁) ရက်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ ပြောခွင့်ရ ဦးအုံးကြိုင် က ပြောသည်။
အင်းစိန်အထူးတရားရုံးတွင် ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီတွင် ရုံးချိန်းစတင်ခဲ့ရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံရန် လာသူများ ယခင် ရက်များကထက် ပိုမိုများပြားခဲ့ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။
“ဒီနေ့ပိုများလာတယ်။ အင်းစိန်ခုံးတံတားကိုလည်း လုံးလုံးပိတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ လုံခြုံရေးတွေလည်း ပိုများလာတယ်။ အင်းစိန် မီးရ ထားဆေးရုံဝင်းမှာလည်း လူနာတွေကို နှင်ချပြီး လုံခြုံရေးကွပ်ကဲရေးရုံးဖွင့်ထားတယ်။ ဆရာဦးဝင်းတင်လည်း နေမကောင်းတဲ့ အကြား က ဆိုက္ကားစီးပြီး အရောက်လာပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လာရောက်ထောက်ခံသူများကို အမည်မသိလူတစုက ကုလသမဂ္ဂအလံတံဆိပ်ပါ ရင်ထိုးများ လိုက်လံဝေငှခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 31 ရက် 2009
ရှေနေ့များနှင့် သံတမန်များ ဝင်ပြီ
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 31 ရက် 2009 ခုနှစ် 10 နာရီ 30 မိနစ်
သို့သော် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်သည့်ကြားမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံကြောင်းပြသသည့်အနေဖြင့် ပါတီဝင်များအပါအဝင် လူ ၅ဝဝ ခန့် စုရုံး ရောက်ရှိနေကြပြီ ဖြစ်သည်။
ကိုဝိုင်း သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 31 ရက် 2009
မဇ္ဈိမ (ချင်းမိုင်)။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားခွင်အပေါ် မကျေနပ်ဖြစ်ကာ ဆူပူအုံကြွမှာစိုး၍ လက်ဦးမှု ရယူသည့် အနေဖြင့် အာဏာပိုင်များက အနည်ဆုံး နိုးကြားတက်ကြွသည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ၅ ဦးကို ယနေ့ နံနက်တွင် ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
အန်အယ်ဒီ စည်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြပြီး မန္တလေးတိုင်း တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်မှ ဦးပါလေး၊ ဦးစိုး၊ ဦးကျော်နိုင်နှင့် မန္တလေးတိုင်း ရေနံချောင်းမြို့မှ ဦးတင့်လွင်၊ ဦးသန်းအောင်တို့ အဖမ်းခံရသည်။
မန္တလေးတိုင်း ရေနံချောင်းမြို့မှ အန်အယ်ဒီ မြို့နယ်စည်းအဖွဲ့ဝင် ဦးတင့်လွင်နှင့် ဦးသန်းအောင်တို့ ၂ ဦးကိုလည်း အာဏာပိုင်များက ယမန်နေ့ညတွင် လာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း အန်အယ်ဒီက ပြောသည်။
ယနေ့န့က်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ အန်အယ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်များက ဦးဆောင်ပြီး ရေနံချောင်းမြို့တွင် ပန်း၊ ဆီမီး၊ ဖယောင်းတိုင်၊ အမွှေးတိုင်များကို နေရာခွဲ လူခွဲ၍ ကပ်လှူဆုတောင်းခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ - (အပိုင်း ၁၄)
ဒေါ်စုကို ထောင်ချလျှင် တိုက်ပွဲဝင်ရန် လှုံ့ဆော်စာများ ဖြန့်ကြဲ
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကို ထောင်ချလျှင် တိုက်ပွဲဝင်ရန် နိုးဆော် ထားသော စာ များကို ရန်ကုန်မြို့ တာမွေမြို့ နယ်အတွင်း ယနေ့ ညနေက ဖြန့်ကျဲ သွားခဲ့ သည်ဟု တွေ့မြင် လိုက်သူ များက ပြောသည်။
တိုက်ပွဲဦးဆောင် ကော်မတီ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် က ဖြန့်ချီခြင်း ဖြစ်သည်ဟု စာတွင် “၃၁ ရက်နေ့မှာ ဒေါ်စုကို ထောင်ချတော့မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ကျရာနေရာမှ တိုက်ပွဲဝင်ရန်” နိုးဆော်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။
အနည်းဆုံးစာရွက် ၂၀ ခန့် ဖြန့်ကျဲသွားခဲ့ပြီး ရဲက သိမ်းဆည်းသွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
မနက်ဖြန်တွင် ပြုလုပ်မည့် အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားခွင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စီရင်ချက်ချကာ အပြစ်ပေးလျှင် လူထုအုံကြွမှု ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် လုံခြုံရေးများ တိုးမြှင့်ချထားသည့်ကြားမှ လှုံ့ဆော်မှုများ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
DKBA နှင့်နအဖပူးပေါင်းတပ်များ KNUတပ်မဟာ ၆ ဧရိယာသို့ဝင်ရောက်လာပြီ
စံခလပူရီ(ဇူလိုင်-၃၀)။ ။ DKBA - တပ်မဟာ ၅ မှူး၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားဖွယ်(ခ) နှုတ်ခမ်းမွေး ဦးစီးအင်အား၇၀ ခန့်တို့ သည် သံဖြူဇရပ်၊ အနန်းကွင်း၊ တံခွန်တိုင် လမ်းသုံးခွဆုံရာ ဖားပြရွာသို့ ယနေ့နံနက်ပိုင်း၌ ဝင်ရောက်စခန်းချလျှက်ရာ အနီးတဝိုက်ရှိ ကရင်ရွာသားများကိုခေါ်ယူ၍ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း KNU အရာရှိတစ်ဦးက ဖုန်းဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ကရင်ရွာသားယောက်ျားများ အတွေ့မခံကြပဲ တောနက်ထဲသို့ သွားရောက်ပုံးခိုနေကြရပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မိန်းမသား များသာ ယင်းအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့ဟု ဆိုသည်။
နယ်စပ်စစ်သတင်းလေ့လာသူများမှ လက်ခံရရှိခဲ့သော သတင်းတစ်ရပ်မှာ KNU တပ်မဟာ ၆ နယ်မြေအား စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ရန် မကြာခင်ရက်ပိုင်း၌ ရတခတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်းက လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များထံ ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် အနန်းကွင်းရွာ၌ ရတခ ဗျူဟာ ၂ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်၊ ဘုရားသုံးဆူနှင့် အနန်းကွင်းကြားတွင်
စကခ ၁၂၊ နည်းဗျူဟာ ၁ မှဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရှိန် တပ်ဖွဲ့များ အခြေပြုနေသည်။
ဒီကေဘီအေ အထူးတပ်ရင်း ၉၀၄ ကပိုင်ခလယ်မှ ထီးတပေါင် ထိုင်နယ်စပ်လမ်းကြောင်း၊ အမှတ် ၉၀၁-
တပ်ရင်းက ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမှ ကျွန်းချောင်းလမ်းကြောင်း၊ အမှတ် ၉၀၆-တပ်ရင်းက ဇမိမြစ်အနောက်ဖက် ခြမ်းလမ်းကြောင်းများ သတ်မှတ်ထားကြောင်း KNU ဖက်မှ ကြိုတင်သတင်းရရှိထားသည်ဟု ဆိုသည်။
သို့ရာတွင် KNU တပ်မဟာ ၆ အရာရှိတစ်ဦးက “ကျနော်အရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ တပ်မဟာ ၆ ဌာနချုပ် ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာ ကျနော်လည်းမသိဘူး” ဟုပြောခဲ့ဘူးသည်။ KNU တပ်မဟာ ၆ သည် စခန်း အသေထိုင်ထားခြင်းမရှိပဲ ကျယ်ပြန့်သော နယ်မြေတွင် လှုပ်ရှားသွားလာရင်း ပြောက်ကျားစနစ်ကိုသာ ကျင့်သုံးကြသည်ဟု သိရသည်။
နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေတို့၏ ယခုထိုးစစ်မှာ မည်သည့်နေရာကို အဓိကထားထိုးစစ်ဆင်လာမည်ကို စစ်ရေး အကဲခတ်သမားများ နားမလည်ကြသေးသော်လည်း စစ်ဆင်ရေးအနေအထားအရ ဘုရားသုံးဆူဒေသ အနီးတဝိုက်ကို ဦးတည်နေသည်ဟု ပြောဆိုနေကြသည်။
မိုးရာသီအတွင်း ယခုထိုးစစ်ဆင်မှုများကြောင့် စစ်အစိုးရနှင့် ဒီကေဘီအေတို့၏ ပေါ်တာအထမ်းသမားအဖြစ်သို့ မရောက်ရှိစေရန် ဒေသခံများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းထားကြရသည်ဟု သိရသည်။
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမှ ပဲ့ချိပ်လှေစီးပြီး ဘုရားသုံးဆူမြို့သို့ ယမန်နေ့က ရောက်ရှိလာသော မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ဆေးမှူးတစ်ဦးအဆိုအရ လမ်းခရီးတလျှောက် ဖေါင်ဖွဲ့ဈေးအိမ်များတွင် လူမစည်ကားတော့ကြောင်း၊ ရွာသားများလည်း စက်လှေသံများကြားတိုင်း သတိထားပြီး ထွက်ကြည့်နေကြကြောင်း သိရပါသည်။
မကြာမီတွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်လာမည်ကို ဘုရားသုံဆူမြို့ဒေသရှိ ကရင်အမျိုးသားများအကြား အလွန်စိုးရိမ် နေကြရသည့် ပြောဆိုသံများ ထွက်ပေါ်နေ၏။
ဘားအံခရိုင်အတွင်း မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA ပူးပေါင်းတပ်များက KNU တပ်မဟာ(၇) တပ်စခန်းများကို ဇွန်လဆန်းပိုင်းမှ စတင်ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့၍ KNU တို့ဆုတ်ခွါပေးလိုက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကရင်ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော် ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေကြရသည်။
၂၀၀၉ ခု၊ မေလ ၂၁ ရက်နေ့၊ မြဝတီမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော DKBA အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုဖွဲ့စည်းပုံသစ်အရ
DKBA - တပ်မဟာ ၅ မှူး၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားဖွယ်(ခ) နှုတ်ခမ်းမွေးက တပ်ဖွဲ့များကိုဦးစီးပြီး ကလို့ထူး ဘောဗျူဟာမှူး- ဗိုလ်မှူးကြီး စောစိန်မြင့်၊ ဒု- ဗျူဟာမှူး- ဗိုလ်မှူးကြီး စောမောသို တို့ပါဝင်ကြသည်။
လက်အောက်ခံတပ်များမှာ ထီးဖိုးသံ၊ ကြအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အခြေစိုက်တွင် တပ်ရင်းမှူး- ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောဘလူး ၉၀၁-တပ်ရင်း၊ အစွန်းရွာ၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အခြေစိုက် တပ်ရင်းမှူး- ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောကျော်ကျော် ၉၀၄-တပ်ရင်း၊ တံခွန်တိုင်ရွာ၊ ကြာအင်း ဆိပ်ကြီး မြို့နယ်တပ်ရင်းမှူး- ဒုဗိုလ်မှူးကြီး မန်းဥာဏ်မင်း ၉၀၆-တပ်ရင်း၊ မြဝတီမြို့၌တပ်ရင်းမှူး- ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောနော်တယာ ၉၀၇- တပ်ရင်း၊ တပ်ရင်းမှူး- ဒုဗိုလ်မှူးကြီး နယ်လယ်ဟေး(ခ) နိုင်လွန် ၉၀၅-တပ်ရင်းတို့ဖြင့် အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဟု DKBA မှတ်တမ်းအရ သိရသည်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ July,31th,2009
( 52 )ဘန်ကောက်မှ မြန်မာတချို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံ ဆန္ဒပြ
( 51 )လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း အပိုဒ် (၃) ကို ချိုးဖောက်နေသည်ဟု (HRDP)ပြော
( 50 )မုန်းတိုင်းသင့်ဒေသ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ အကျိုးခံစားပိုင်ခွင့်များ မရရှိသေး
( 49 )ဘန်ကောက်မြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ
( 48 )အိန္ဒိယရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများ ဖမ်းဆီးခံရ
( 47 )လေးဖြူနှင့် နာမည်ကြီးအဆိုတော်များ ရန်ကုန်တွင် ဖျော်ဖြေမည်
( 46 )Scores of supporters arrested, as court postpones verdict on Suu Kyi
( 45 )ဖမ်းဆီးမှုများပြား၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ၃၀ ဦးခန့် ဖမ်းခံရ
( 44 )ကြက်ဥ အတုများ ဝင်ရောက်နေဟု အစိုးရ သတိပေး
( 43 )26 Dissidents Detained in Rangoon
( 42 )ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု စီရင်ချက်ချမည့်ရက် ရွှေ့ဆိုင်း
( 41 )ဗီဇာပိတ် စာရင်းဝင်သူများကို စိစစ်ရန် ဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြား
( 40 )Burmese Regime Deliberately Depresses Economy
( 39 )စားသုံးဆီကြောင့် စီးပွားရေးဦးပိုင်နှင့် ဦးတေဇ အချင်းများကြ
( 38 )ဗမာစာဖြင့် ရှာနိုင်မည့် ရှာဖွေရေး ဝဘ်ဆိုဒ်တခု ပေါ်ထွက်
( 37 )Several areas in Ann inundated after torrential rain
( 36 )မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ကေအိုင်အိုနယ်မြေရောက်ရှိစစ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်လေ့လာ
( 35 )Myanmar's conundrum over Suu Kyi
( 34 )ကြက်ဥအတုများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်ဟု နအဖ သတင်းဖြန့်
( 33 )Filipino activists call for immediate release of Suu Kyi
( 32 )မုန်းတိုင်းသင့်ဒေသ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ အကျိုးခံစားပိုင်ခွင့်များ မရရှိသေး
( 31 )Supportive faces
( 30 )အမ်းမြို့ရေမြုပ်
( 29 )ကြက်ဥအတုများ နယ်စပ်ဒေသမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်
( 28 )Shan studies conference in October
( 27 )ကုလဆိုင်ရာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကို ဘန်ကီမွန်း ခေါ်တွေ့
( 26 )Myanmar’s rulers still fear ‘The Lady’
( 25 )ဒေါ်စုအမှု စီရင်ချက်အတွက် လုံခြုံရေး တင်းကျပ်
( 24 )Myanmar court postpones Suu Kyi verdict
( 23 )ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စီရင်ချက်ကို သြဂုတ် ၁၁ သို့ထပ်မံချိန်း
( 22 )Suu Kyi's verdict delayed to August 11
( 21 )မြန်မာကြက်သွန်နီ တင်ပို့မှုကန့်သတ်
( 20 )What next after failure to make junta change its way?
( 19 )'Free Suu Kyi now'
( 18 )ကြက်ဥအတုများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်
( 17 )ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် စပါးစိုက်ခိုင်းသဖြင့် လယ်သမားများအခက်တွေ့
( 16 )အမျိုးသမီးငယ် ၂ ဦး ထိုင်းနိုင်ငံ ခိုးဝင်စဉ် အဖမ်းခံရ
( 15 )ပိတ်ပင်ခံရသော ဆေး ၆ မျိုး ထပ်တိုးလာ
( 14 )လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွင် စစ်ထောက်လှမ်းရေးများ ပြန်လွတ်လာဖွယ်ရှိ
( 13 )မြန်မာနိုင်ငံတွင် A (H1N1) ကူးစက်မှု ပိုများနိုင်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများပြော
( 12 )Junta issues warning to Suu Kyi supporters
( 11 )ဆေးကျောင်းသူ သေဆုံးမှု ရွှေမန်းသူ အတိုင်ခံရ
( 10 )ဒေါ်စု အမှုကို စီရင်ချက်ချမည့် ကိစ္စ ပြည်ပ အတိုက်အခံများ၏ သဘောထား
(9)Burma Superstar's new Temescal locationahit
( 8 )နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောင်းရေး ကချင်နှင့် မိုင်းလားဖက်ကို ပိုမိုဖိအားပေး
(7)American Who Swam to Burmese Pro-Democracy Leader's Home Could Learn Fate Friday
(6)လ၀က ရုံး ဖျက်းဆီးသူများကို ဖမ်းဆီးထား
(5)Burma warns against protests ahead of Suu Kyi verdict
(4)prepared for the worst
(3)ဒေါ်စုအပေါ် တရားစွဲဆိုမှု ရုပ်သိမ်းပြီး လွှတ်ပေးဖို့ ဘန်ကီမွန်း တောင်းဆို
(2)Aung San Suu Kyi 'resigned to jail sentence'
( 1 )အာဆီယံ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးများ မန္တလေးမှာ ဆွေးနွေး
အေးလဲ့ Thursday, 30 July 2009
မနက်ဖြန် တွင် ပြုလုပ် မည့် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်း ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ၏ အမှုစီရင်ချက် ချမည့်ကိစ္စကို လူအများ စိတ်ဝင် စားလျက် ရှိပြီး လုံခြုံရေး များ တင်းကျပ် ထား သည့် ကြားက လူထု တရပ်လုံး ပါဝင်ရန် နှိုးဆော် ထားသည့် စာများ ပျံ့နှံ့ လျက်ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိ သည်။
အကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး ဘန်ကီမွန်း မျှော်လင့်
သန်းထိုက်ဦး Thursday, 30 July 2009
အကျဉ်းသားများကို လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ပေးမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးသန်းဆွေက ကတိ ပေးထားသဖြင့် အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်လာမည်ကို မျှော်လင့်နေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ပြောကြားလိုက်သည်။
ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုကို စစ်အစိုးရက အမိန့်ချရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်တွင် ယမန်နေ့က ကျင်းပခဲ့သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ထိုသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက မြန်မာပြည်သို့ ၂ ရက်ကြာ သွားရောက်ခဲ့သည့် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ၎င်း၏ ခရီးစဉ်နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည် အရေးကိုလည်း မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားစွဲခံနေရခြင်းကို စိုးရိမ်မိကြောင်း သတင်းထောက်များကို ပြောပြသည်။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးသန်းဆွေ ကိုယ်တိုင် လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးတခုတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရက အကျဉ်းသားများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လွှတ်ပေးမည့် အစီအစဉ်သည် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၏ တောင်းဆိုချက်အရ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
အကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးမည်ဟု သံအမတ်ကြီး၏ ပြောကြားချက်မှာ ၂ ပတ် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း အကျဉ်းသား တဦးမှ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် မရရှိသေးပေ။
သံအမတ်ကြီး၏ အာမခံချက်ကိုလည်း နိုင်ငံရေးသမားများ နှင့်လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက သံသယရှိကြသည်။ သံအမတ်ကြီး၏ ပြောကြားချက်တွင် “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား” ဟူသော စကားလုံး ပါဝင်ခြင်း မရှိကြောင်းလည်း ၎င်းတို့က ထောက်ပြကြသည်။ လွှတ်ပေးမည် ဆိုလျှင်လည်း ယခင်ကကဲ့သို့ပင် သာမန်အကျဉ်းသား ထောင်ဂဏန်း နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆယ်ဂဏန်းကို လွှတ်ပေးမည်ဟု ယူဆနေကြသည်။
လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များ၏ စာရင်းအရ မြန်မာပြည်အနှံ့ အကျဉ်းထောင်များတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂ဝဝဝ ကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကျင်းပခဲ့သော အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ ညစာစားပွဲ တခုတွင် ပြောကြားရာ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား လွှတ်ပေးရန် ဟူသော တောင်းဆိုချက်မှာ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိဟု ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် စွဲဆိုထားသည့် အမှုအား ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့ (မနက်ဖြန်)တွင် စီရင်ချက်ချမည်ဟု သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၎င်း၏အိမ်သို့ မစ္စတာ ဂျွန် ဝီလျံယက်ထော တိတ်တဆိတ်ခဲ့မှုကြောင့် တရားစွဲခံနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
လာမည့်နှစ်တွင် ကျင်းပမည်ဟု ကြေညာထားသည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ချုပ်နှောင်ထားလိုသဖြင့် အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ၅ နှစ် ချမှတ်ဖွယ်ရှိသည်ဟု မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးလောကတွင် ခန့်မှန်းနေကြသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်း ပုံ အခြေခံဥပဒေ နှင့် လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပညာပေး အစီ အစဉ် များနှင့် စည်းရုံး ရေးဆိုင်ရာ စစ်အ စိုးရ အာဘော်များ ကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ စကား များဖြင့် ထုတ်လွှင့် သည့် ရေဒီယို လိုင်းသစ် တခုကို ယခုတပတ်အတွင်း စတင် တင်ဆက်နေသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နေပြည်တော်တွင် လွန်ဆွဲနေ
နအဖ စစ်အုပ်စု အနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ရွေးချယ် ခံရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ခဲ့ရာ အဆိုပါ အစည်း အဝေး ပွဲအား အဆုံး မသတ် နိုင်ဘဲ ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်း ထားရ သည်။
လက်ရှိ စစ်ခေါင်း များအ နေဖြင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်း ပုံဥပဒေပါ အချက် အလက်များ အရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့ နှစ်ဦး စလုံး အရပ်ဖက် အသွင်ကူး ပြောင်းရေး အတွက် ၎င်းတို့ နှစ်ဦး အကြား သဘော တူညီမှု မရရှိ သေးခြင်း ဖြစ်သည်။
“လက်ရှိ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ ရွှေမန်းကို တပ်ထဲမှာ ဆက်ထား ခဲ့ဖို့ တပ်ချုပ်က ပြောတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဦးအေး က ဒီ ကိစ္စ ကို သဘော မတူဘူး၊ သူကိုယ်တိုင် ဦးစီး ချုပ် ဆက်လုပ် မယ်ပြောတယ်” ဟု နေပြည်တော် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ အ မည် မဖော်လို သူ တပ်ကြပ်ကြီး စာရေး တဦးက ပြောသည်။
စစ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးအကြား ယင်းပဋိပက္ခမှာ လွန်ခဲ့သည့် တလခန့်က စတင်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအစည်းအဝေးကိုပင် ရပ်ဆိုင်းရသည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသွားသည်။
ထို့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တရားစွဲဆိုထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း တပ်မတော်အတွင်းရှိ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်တပ်သားများအကြားတွင်လည်း ဝေဖန်မှုများ၊ မကျေနပ်မှုများ ပေါ်ပေါက်နေလျှက်ရှိသည်။
ယခုဖြစ်ရပ်သည်လည်း တပ်မတော်အနာဂါတ်အတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာရှိလာပြီဟု အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ရှိ တပ်ရင်းတခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ တပ်ခွဲမှူးတဦးက ပြောသည်။
နအဖစစ်အစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို တဖက်သတ် အတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်း အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွှတ်ပေးပြီး နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုသည့် ရွေးကောက်ပွဲတခုဖြစ်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ပြိုင်ဘက်နဲ့ ရန်သူ ...
ကျနော်က First-11 ဂျာနယ်တွေရဲ့ ပရိသတ်တယောက်ဆိုတော့ အပတ်စဉ် ထွက်သမျှ Eleven ဂျာနယ် လေးမျိုးစလုံးကို ပုံမှန် ဖတ်ဖြစ် နေကျပါ။
တရက်မှာတော့ အပတ်စဉ်ထုတ် အားကစားဂျာနယ်အသစ်ကို သွားဖတ်ရင်းနဲ့ အားကစားဆောင်းပါးရှင် ဆရာကြီး ခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား) ရေးတဲ့ `ပြိုင်ဘက်ဟာ ရန်သူမဟုတ်´ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို သွားဖတ်မိတယ်။
ဆရာကတော့ ဘောလုံးအားကစားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေသာ အရေးများသူမို့ အဲဒီဆောင်းပါးမှာလည်း ဘောလုံးအားကစားနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ အကြောင်းအရာကိုသာ အခြေပြုရေးခဲ့တာပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ဆရာရေးခဲ့တာက အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ နည်းပြ စကိုလာရီကို ထုတ်ပယ်ပစ်လိုက်တာကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်က မဖြစ်သင့်တဲ့အကြောင်း နည်းပြအချင်းချင်း ဖေးမတဲ့စကား ပြောပေးခဲ့တာကို ချီးကျူးပြီးတော့ အခြေခံရေးခဲ့တယ်လို့ မှတ်မိတယ်။ နောက်တော့ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ချဲလ်ဆီး ကလပ်အသင်းမှာ ကစားတဲ့ လမ်းပတ်၊ လီဗာပူမှာ ကစားတဲ့ စတီဖင်ဂျာရတ်နဲ့ မန်ယူမှာကစားတဲ့ ရူနီတို့ဟာ သူတို့ကလပ်အသင်း အချင်းချင်း တွေ့ဆုံကစားကြတဲ့အခါ အသည်းပေါက်မတတ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ယှဉ်ပြိုင်ကစားလေ့ရှိပေမယ့် အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင် အသင်းအတွက် ကစားရပြီဆိုရင်တော့ စည်းလုံးညီညွှတ်လှစွာနဲ့ပဲ နိုင်ငံအသင်းရလဒ်ကောင်းဖို့ အားတက်သရော အတူတကွ ကစားကြတာကို ဆရာရေးခဲ့တာကို ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒါတွေကို ဥပမာပေးလို့ ဆရာ ရေးသွားတာရဲ့ အနှစ်ချုပ်က `ပြိုင်ဘက်ဟာ ရန်သူ မဟုတ်ဘူး´ ဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။
နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရေးကြတဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတွေ့အကြုံကို အခြေခံတဲ့ စာတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီဘက်ဟိုဘက် မီဒီယာတွေမှာ အသောင်းသောင်း အပြောင်းပြောင်း ရေးကြတဲ့အခါမှာ `ရန်သူ´ `ရန်သူ့ကို´ `ရန်သူ့လူ´ စသဖြင့် သုံးနှုန်းရေးသားတာတွေကို မကြာခဏဆိုသလို တွေ့မိဖတ်မိ ကြမှာပါပဲ။
အဲဒီလို သုံးနှုန်းရေးသားတဲ့ `ရန်သူ´ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတွေ့တော့ ကျနော် စဉ်းစားမိတာက ရန်သူဆိုတာက ဘယ်သူတွေကို ကျနော်တုိ့ သတ်မှတ်မှာလဲ၊ ကျနော်တို့နဲ့ မတူသူလား၊ ကျနော်တို့နဲ့ မတူတဲ့ လူတိုင်းကရော ကျနော်တို့ရဲ့ တကယ့်ရန်သူပဲလား ဆိုတာတွေကို ဆက်စပ်တွေးတောမိပြန်တယ်။
သေချာစေ့ငုံအောင် စဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ `ပြိုင်ဘက်´ ဆိုတာဟာ လုံးဝ ရန်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ မတူတဲ့ အမြင်ကိုယ်စီနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုယ်စီ ရှိလို့သာ လျှောက်နေတဲ့ လမ်းကြောင်း ကွဲပြားချင် ကွဲပြားနေပါစေ၊ ရည်ရွယ်ရာ ပန်းတိုင် တူနေတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့နဲ့ မတူသူ တဘက်လူဟာ ပြိုင်ဘက်ပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ပြိုင်ဘက်တွေမှာလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။ စောစောက ရေးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးစကားအရ ဆက်စပ်ပြောရရင် ချဲလ်ဆီးနဲ့ မန်ယူ မတူတဲ့ ကလပ်နှစ်ခုမှာတုန်းက အသည်းပေါက်အောင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားတွေဟာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အတွက် အတူတူကစားရရင်တော့ ချဲလ်ဆီးတို့၊ မန်ယူတို့မှာ ကစားတုန်းက ထားခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို မေ့ဖျောက်ပြီးတော့ မိမိနိုင်ငံအသင်း အောင်မြင်ဖို့အတွက် စည်းလုံးဖို့ စိတ်ထားက ရှိရပါတော့မယ်။
ဒီတော့ စွဲကိုင်ထားတဲ့ အယူအဆ၊ ပါဝင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း မတူဘူးဆိုတာ တခုထဲနဲ့တော့ ကိုယ်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ကျနော်တို့တွေ `ရန်သူ´ လို့ မသတ်မှတ်စကောင်းဘူးလို့ တွေးစရာ ရှိပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးနဲ့ မန်ယူအသင်းတွေမှာ တဘက်စီ ကစားတုန်းကလည်း ဒီလူတွေဟာ ရန်တစောင်စောင်နဲ့ ကစားခဲ့ပြီးပြီ။ နိုင်ငံတကာ အသင်းအတွက် ကစားရတဲ့ အခါကျတော့လည်း `ဒီကောင်၊ ငါနဲ့ ကလပ်ချင်းတူတာ မဟုတ်ဘူး၊ အခု တသင်းထဲ ကစားတုန်း ဒီကောင့်ကို ပုံစံပေးရမယ်´ ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးကို ဆက်သယ်သွားရင်တော့ နိုင်ငံအသင်းအတွက်ပါ သွားထိခိုက်ပါတော့မယ်။
နိုင်ငံတခုအတွက် စစ်တပ်ဆိုတာ ရှိအပ်၊ ရှိသင့်တဲ့ အဆင်တန်ဆာတခု ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူအပေါ် ကာကွယ်ဖို့ အလို့ငှာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ စစ်တပ်တွေ ရှိကြရတယ်။ စစ်တပ်တွေရဲ့ တာဝန်ဟာ သူ့ပြည်သူကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံကို စောင့်ရှောက်ဖို့ပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ပြည်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံအပေါ်ကို ကာကွယ်နေရိုးမှန်ရင်တော့ ဒီစစ်တပ်ဟာ သူ့ကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် ရန်သူ ဖြစ်လာစရာ မရှိပါဘူး။ မတူတဲ့ အမြင်တွေရှိလို့သာ ဆန့်ကျင်နေရမယ်၊ သူတို့ကို ပြိုင်ဘက်လို့ သတ်မှတ်ရုံသာ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူ ကိုယ်သတ်ပြီး နိုင်ငံတခုလုံးကို ငါ့သား၊ ငါ့သမီး၊ ငါ့ဆွေမျိုး၊ ငါ့မိဘ ဆိုတဲ့ `ငလေးလုံး´ အတွက်ကိုပဲ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ စစ်တပ်မျိုးကိုကျတော့ ပြိုင်ဘက်လို့ သတ်မှတ်ဖို့က အတော်ခက်ပါတယ်။ အဲဒီလို လမ်းစဉ်မျိုးကို ယုံကြည်သက်ဝင်နေတဲ့ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ် မှန်သမျှဟာလည်း ကျနော်တို့အတွက်တော့ ရန်သူသာ ဖြစ်လာမှာပါပဲ။
ဟော ...၊ ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်သက်ဝင်ပါတယ်လို့ တွင်တွင်ပြောပြီးတော့ မိမိယုံကြည်တဲ့ဝါဒအတိုင်း ဖြစ်လာအောင် ကိုယ်တိုင်က ကြိုးစားရမယ့်အပြင် ကိုယ့်လို ယုံကြည်သူတွေ ပိုများလာအောင်၊ ဒီမိုကရေစီဝါဒကို အခြေခံပြီး တိုင်းပြည်အကျိုးရှိမယ့် အရာတွေကို ဦးစားပေး မစဉ်းစားဘဲ ကိုယ်ကျိုးတခုထဲကိုသာ ကြည့်တဲ့လူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေကို ကျတော့ပြန်တော့လည်း ဘောလုံးစကားပြောရရင် တသင်းထဲ ကစားနေရင်တောင် အသင်းကစားဖော်လို့ သတ်မှတ်ဖို့ ခက်သလို အသင်းမတူရင်လဲ ပြိုင်ဘက် မဖြစ်လာနိုင်ပြန်ပါဘူး။
`ခင်ဗျား ကျနော့်ကို ရန်သူတယောက်လို သတ်မှတ်တယ် မဟုတ်လား´
ဒီစကားကို ကျနော်လုံးဝ မနှစ်သက်ပြီး အရင်ကရော အခုအချိန်ထိ ဆန့်ကျင်နေဆဲ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ စစ်ဗိုလ်တယောက်က မေးခဲ့ဖူးတယ်။ `ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ရမယ့် အရာတွေကို ခင်ဗျားလုပ်နေရင်တော့ ရန်သူပေါ့ဗျာ´ လို့ပဲ ပြန်ဖြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြပြီး ကိုယ့်ကိုလည်း ဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့ ကိုယ့်တူသားအရွယ် ကျောင်းသားလေးရဲ့ ကျောကုန်းကို ဗြန်းခနဲနေအောင် ဝါးရင်းတုတ်နဲ့ ရိုက်ချပစ်လိုက်တဲ့ လူမျိုး၊ ငြိမ်းချမ်းစေလိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ လူဝတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကို ပြန်လည်ဦးချရှိခိုးနေတဲ့ ဘုရားသားတော် သံဃာတွေကို ရိုက်နှက်ဝံ့တဲ့ လူမျိုးဟာ ကျနော်တို့အတွက် ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ အဲဒီလို စိတ်ထားမျိုးနဲ့ လူမျိုးတွေဟာ ဟိုး အောက်လက်ငယ်သားကနေ အကြီးဆုံး ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအထိ ရန်သူပါပဲ။
ဝတ်ထားတာက စစ်ယူနီဖောင်း ဖြစ်နေပေမယ့် သူ့အတွေးထဲမှာ ကိုယ့်ပြည်သူ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အကျိုး တကယ်ရှိမယ့် အရာတွေကို ဦးစားပေးစဉ်းစားပြီး တကယ်လည်း လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့ လူဟာတော့ အမြင်မတူလို့ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေတာကလွဲရင် ရန်သူလို့ သတ်မှတ်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။ တကယ်ဆို ကျနော်တို့တွေဟာ ရန်သူကို ရန်သူလို တကယ်ကိုပဲ ခွဲခြားသိမြင်တတ်ဖို့ ဆင်ခြင်ပိုင်းခြားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ မတူတဲ့ မြင်မြင်ကရာကို `ရန်သူဟေ့´ ဆိုပြီး လက်ညှိုးထိုးလိုက်ရင် အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိမယ့် ပြိုင်ဘက်ကောင်းကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
`ဟေ့၊ ငါတို့ စစ်တပ်မှ စစ်တပ်ဟေ့။ တခြားလူတွေ၊ အဖွဲ့တွေက ငါတို့စစ်တပ် အုပ်ချုပ်နေတာလောက် တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုမှ လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီတော့ ငါတို့ကို ဆန့်ကျင်တာနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ ကောင်တွေ မှန်သမျှ အသေသာ မှတ်ပေတော့´ ဆိုတဲ့ စစ်သားဟာ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေအတွက် ထာဝရ ရန်သူ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီစိတ်ထားမျိုးနဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ အကြီးဆုံး ရန်သူပေါ့။
တပ်သားသစ်ကို ဆန်နှင့် ဖလှယ်ပြီး စုဆောင်း
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ရှေ့တန်း စစ်စခန်းများမှ တပ်သားသစ်များကို စုဆောင်းရာတွင် ဆန်နှင့် ဖလှယ်ပြီး စုဆောင်းနေသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
အိန္ဒိယ- မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် အစားအစာ ရှားပါးမူနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသဖြင့် နအဖ စစ်တပ်အရာရှိများမှ အဆိုပါ အခွင့်အရေးကို ယူပြီး စစ်တပ်ထဲသို့ ၀င်သူများကို ဆန်ထုတ်ပေးမည်ဟု ဆိုကာ ဆန်နှင့် ဖလှယ် စုဆောင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့အတွက် ပလက်ဝမြို့နယ် ပြင်တိုင်းကျေးရွာမှ လူငယ် (၃) ဦးမှာ မိသားစု အတွက် ဆန်ရမည် ဆိုသဖြင့် လွန်ခဲ့သော အပတ်က စစ်တပ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်သွားသည်ဟု ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ လူငယ်များမှာ အဖမရှိသူ ခမီး လူငယ်များ ဖြစ်ပြီး ခလရ ၃၄ ထဲသို့ ၀င်ရောက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
သူတို့ စစ်တပ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်သွားသဖြင့် တဦးစီင်္ကို ကျပ်ငွေ တသိန်းနှင့် ရွာတွင် ကျန်ခဲ့သော မိသားစုများအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားနှင့် ငပိမှ အစ စစ်တပ်က ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမှာ ဒေသအတွင်းရှိ တောင်ပေါ်သား လူငယ်များအား စစ်တပ်ထဲဝင်ရန် မက်လုံးပေးသည့် အနေဖြင့် ပေးကမ်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သတင်းများက ဖေါ်ပြသည်။ သို့သော်လည်း အများစု လူငယ်များမှာ စစ်တပ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်ရန် ကမ်းလှမ်းမူကို လက်မခံဘဲ ရှိနေကြသည် သိရသည်။
ယခုအခါ နအဖ စစ်တပ်အတွင်း တပ်သားသစ် ၀င်ရောက်မူနုန်း အလွန်ကျဆင်းနေရာ ပလက်ဝမြို့နယ်မှ အသက် ၁၇ နှစ်နှင့် ၂၅ နှစ်အကြား တောင်ပေါ်သား ခမီး၊ ချင်းနှင့် မြို လူငယ်များကို စာမတတ်သော်လည်း တပ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်ရန် အတင်းစည်းရုံး သိမ်းသွင်းနေသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
ဒီတလော ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ အတော်ကျယ်ကျယ်လေးကြားလာရတဲ့ အယူအဆတခုက “နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင် တာကို လုပ်တဲ့ အနုပညာပဲ” ဆိုတာပါ။ ဒါကို ဂျာနယ်တခုရဲ့ အယ်ဒီတာ့အာဘော်မှာတွေ့ရသလို မောင်(ဦး)စူးစမ်းရဲ့ အင်တာဗျူးတခုမှာလည်း တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဒါတွေနဲ့တဆက်တည်း ဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့ ယူဆနည်းက နအဖရဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဗမာပြည်မှာ နဂိုကလုံးဝလှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအဖို့ လှုပ်ရှားဖို့ခွင် (သူတို့အသုံးအနှုန်းအရဆိုရင် Space) ရတာပဲ၊ ဒါကိုမုချအသုံးချရမယ်။ လုပ်ငန်းအားလုံးဒီကနေ အစပြုရမယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေး၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အားလုံးအတွက် အစပြုချက်ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်မြူလာထုတ်ပေးကြပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားဖို့ ခွင်ဆိုတဲ့အယူအဆကို တင်သူတွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း မနည်းဘူး ဆိုတာကို သတိထားမိပါတယ်။
“ဘာမှမရှိတာထက်စာရင် နည်းနည်းရှိတာကတော်သေးတယ်”၊ ဘာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှမရှိတာနဲ့စာရင် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိတာဟာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ထွက်လာပြီးနောက် ဆက်တိုက်ပေါ်လာတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ခါတော်မီအယူအဆတွေလို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။
နအဖရဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှ နအဖရဲ့ လမ်းပြမြေပုံထဲက နံပါတ် (၆) အဆင့်ကို အကာအကွယ်တွေပေးတာ၊ ထောက်ခံတာတွေ ဆက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာတယ် လို့ နားလည်မိပါတယ်။ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်မှာ ရာစုနှစ် တဝက်နီးပါး အသက်ရှင်လာခဲ့သူတဦးအနေနဲ့ ဒီလိုအချိန်အခါမှာ ဒီလိုရေးသူတွေပေါ်တယ်ဆိုတာက တရားတခုလို့ပဲ သဘောထားမိပါတယ်။ မအံ့သြမိကြောင်း ဝန်ခံလိုက်ပါရစေ။ ဘယ်သူတွေကရေးမလဲ။ ဘယ်လိုတွေရေးမလဲဆိုတာဘဲ စောင့်ကြည့်မိခဲ့တာပါ။ အခုတော့ အစီအရီ၊ အယူအဆတမျိုးစီနဲ့ ထွက်လာကြပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ တမျိုးစီဆိုလို့ အနှစ်သာရနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ တခုနဲ့တခု ကွဲပြားတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အဲဒီသဘောနဲ့ ပြောရရင်တော့ ဗြိဇုံနဲ့ဗြုံဇိတွေပါ။
ကိုယ့်အယူအဆတခုကိုတင်ရာမှာ ဒီအယူအဆခိုင်လုံမှုကို ပြောတာထက် ဒါကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေဟာ “စိတ်ကူးယဉ်တာ၊ လက်တွေ့မကျတာ” လို့ တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ဒါကနည်းနည်းတော်ပါသေးတယ်။ သူနဲ့မတူသူတွေဟာ “လေကြီးမိုးကြီးသမားတွေ၊ လက်ဝဲစွန်းသမားတွေ၊ မရိုးသားတဲ့လူတွေ၊ အယောင်ဆောင်သမားတွေ” စသဖြင့်လည်း ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် တွယ်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင် တိုက်ခိုက်လို့ရတာချည်းပဲပေါ့။ မောင်(ဦး)စူးစမ်းဟာ သူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံရေးသမား လို့တောင် မခံယူရဲတော့ဘူးပဲဟာ။ သူဟာပစ်ပြီးသား ကျည်ခွံဖြစ်သွားပြီလို့ သူကိုယ်တိုင်ရေးနေတာပါ။ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ မတူသူတွေကို ပုဒ်မအမျိုးမျိုးတပ်တာ၊ အစိုးရနဲ့ ရန်တိုက်ပေးတာ စတဲ့လုပ်နည်းတွေဟာ ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်ခေတ်မဆို ရှိတတ်တာချည်းမို့ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေက အဲဒီလိုပဲလုပ်တတ်တယ်လို့ အောက်မေ့လိုက်ပါမယ်။
အခုဒီ “ဖြစ်နိုင်တာကိုလုပ်တဲ့အနုပညာပဲ” ဆိုတာကို စောကြောကြည့်ပါမယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ဖြစ်နိုင်တာဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ဘယ်သူ့အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာလဲ။ တကယ်က သူတို့ပြောတဲ့ ဖြစ်နိုင်တာဆိုတာဟာ နအဖကခွင့်ပြုတာတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကို ပြန်လှန်ပြောရရင် နအဖခွင့်မပြုတာမှန်သမျှဟာ မဖြစ်နိုင်တာပါ။ မဖြစ်နိုင်တာတွေမလုပ်ချင်ပါနဲ့။ နအဖခွင့် မပြုတာတွေမလုပ်ချင်ပါနဲ့ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ ဒါကိုပဲ သူတို့က “အနုပညာ” လို့ ကင်ပွန်းတပ်ပေးထားပါတယ်။
မောင်(ဦး)စူးစမ်းကဆိုရင် ဒီနေ့ နိုင်ငံရေးမှာ “ဘယ်သူက Dictate လုပ်နေတာလဲ” ဆိုပြီး “စစ်တပ်နော်-စစ်တပ်” လို့ မပြောရုံ တမယ် ဖြဲခြောက်ပါသေးတယ်။ နောက်တခါ သူက “မနူးမနပ်တွေ Anti-military (စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေး) မလုပ်ကြနဲ့” လို့လည်း သတိပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ ဗိုလ်အောင်ကြီးတယောက်တော့ အရေးအခင်းကာလမှာ “စစ်တပ်ကိုလုံးဝ မပြစ်မှားနဲ့” လို့ ပြောခဲ့တာနဲ့ပဲ နိုင်ငံရေးအမှိုက်ပုံထဲကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း စစ်အာဏာရှင်တွေကို စိတ်နဲ့တောင် ပြစ်မှားခွင့်မရှိတဲ့ “စည်းကမ်းရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီ” ကို အရိုးများသလေး၊ ချေးခါးသလေးမပြောကြနဲ့လို့ သူတို့တတွေက မာမာတင်းတင်း ပြောနေကြပါတယ်။
မဆလခေတ်တုန်းက ‘ခ’ သုံးလုံးပေါ်လစီ (ခိုင်းတာလုပ်၊ ခေါ်ရင်လာ၊ ခံမပြောနဲ့)၊ ထောင်ထဲမှာပြောလေ့ရှိတဲ့ “ပေးတာယူ၊ ကျွေးတာစား၊ စကားမများနဲ့”၊ ခေါင်းထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာတွေ အများကြီးပါပဲ။ သူတို့ရေးတာတွေထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား မြင်သာတဲ့ အချက်တချက်ကတော့ နအဖအစိုးရဘက်ကို တစက်မှအပြစ်မတင်၊ နအဖဘက်က ဘယ်အချက်ဖြင့် လျှော့ပေး သင့်တယ်ဆိုတာမျိုး တကြောင်းတပါဒမျှ မရေးတာပါဘဲ။
နအဖစစ်အာဏာရှင်တွေက ရေးဆွဲတဲ့လမ်းပြမြေပုံကနေ စစ်တပ်က (၂၅) ရာခိုင်နှုန်း ယူထားမယ့်လွှတ်တော်ကို မွေးထုတ် လိုက်ပါတယ်။ တခါ အဲဒီလိုလွှတ်တော်ကနေ စစ်တပ်ကရေးဆွဲပြီး မတရားအတည်ပြုထားတဲ့ စစ်တပ်ကို အချိန်မရွေး အာဏာသိမ်းခွင့် ပေးထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို တရားဝင်အတည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပါမယ်။ ဒီကနေ ပေါ်ထွက် လာမယ့် ဒီမိုကရေစီကနေ ဘယ်လို နိုင်ငံရေး၊ ဘယ်လို ဒီမိုကရေစီတွေ ဆက်ထွန်းကားမယ်ဆိုတာ ရှင်းနေတာပါ။ အဲဒီလို နိုင်ငံရေးဘောင်၊ နိုင်ငံရေးခွင်ကိုပဲ “လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ခွင်” လို့ထောက်ပြပြီး အားလုံးကို ပုံအောခိုင်းနေကြတာပါ။ ဒါကိုပဲ ဖြစ်နိုင်တာလို့ပြောပြီး သူတို့နဲ့မတူသူတွေကို မဖြစ်နိုင်တာပြောတဲ့ စကားကြီးစကားကျယ်သမားတွေ၊ လက်တွေ့မကျသူတွေလို့ ပြောနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လာလတ္တံ့သော နအဖရဲ့ “စည်းကမ်းရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီ” ရဲ့ ရှေ့ပြေးလုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ များလား၊ မစဉ်းစားဘဲမနေနိုင်ပါဘူး။
ကောင်းပါပြီ။ အဲဒီ “ခွင်” မှာ ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ။ ပါတီဆိုင်းဘုတ်တွေ ထောင်ခွင့်ရပါမယ်။ အမတ်တွေဖြစ်လာပါမယ်။ ဒါပေမယ့် “နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ” နဲ့ “တပ်မတော်” ကို ဝေဖန်ပြောဆိုရေးသားခွင့်ရှိမလား။ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခွင့်ရှိမလား။ (နိုင်ငံရေး ပါတီတွေအချင်းချင်း ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခွင့်တွေ ပေးမှာကတော့ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး)။ နောက်ပြီး ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ အနီးခေတ် သမိုင်းကို အမှန်အတိုင်းရေးသားဖော်ပြခွင့်ရှိမလား။ အဲဒါတွေမပါတဲ့ နိုင်ငံရေးမျိုးတော့ အခုလည်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရနေတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
“ခွင်” ဆိုတာတော့ပေးပါရဲ့၊ အဲဒီ “ခွင်” ကနေ ငါတို့ကိုကြိုက်သလောက် ချီးကျူးစမ်းကွာလို့ ဖွင့်ပေးထားတာမျိုးဆိုရင်တော့ မဖြစ်ဘူးထင်ပါတယ်။ “ခွင်” ထဲမှာ ဘုရင်လုပ်ခွင့်မပေးဘဲ မျောက်လောင်းပဲ လုပ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုရင် ဘယ့်နှယ်ပြောပါ့မလဲ။ ခွင်တခု ပေးတယ်ဆိုတိုင်း ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ထောက်ခံကြိုဆိုနေတာ မှားပါတယ်။
အထက်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ အယူအဆကို တင်ပြသူတွေထဲက ဘယ်တယောက်ကမှ နအဖစစ်ဗိုလ်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အယူ အဆတွေ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ ပြောင်းကုန်မှာ၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကို ပြောင်းယူမယ်လို့ မပြောကြပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သူတို့က လွှတ်တော်ထဲမှာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ သမ္မတနေရာ၊ နောက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ဝန်ကြီးနေရာတွေကို စစ်တပ်ကိုထာဝရယူထားခွင့် ပြုမယ်လို့ အာမခံတဲ့သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံတို့ရဲ့ ဟိုဘက်မှာ လူတချို့ အမတ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလောက်ကလွဲလို့ သူတို့ဟာ ဘာမှဝမ်းပါးလောက်အောင် ထောက်မပြနိုင်ကြပါဘူး။ စစ်တပ်ကိုယ်စား လှယ် ပါဝင်မှုကို (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းကနေ တဖြည်းဖြည်းလျော့သွားအောင် လုပ်ယူမယ်လို့တောင် ဘယ်သူမှ မပြောဝံ့ပါဘူး။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို “ဝမ့်စွေ့” ကြွေးကြော်ဖို့ အမတ်လုပ်ရတာဆိုရင်တော့ သမိုင်းလူပြက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
စစ်တွေတွင် လုံခြုံရေး မတင်းကျပ်သော်လည်း
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေတွင် လုံခြုံရေး မတင်းကျပ်သော်လည်း ရဲစခန်းများတွင် ရဲသားများကို အင်အားဖြည့် တိုးချဲ့ ချထားသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သောကြာနေ့တွင် တရားရုံးမှ စီရင်ချက် ချမည် ဖြစ်ရာ စစ်တွေတွင် ထူးခြားမူများ ရှိပါသလားဟု စစ်တွေမြို့ခံ တဦးကို နိရဉ္စရာက မေးမြန်းရာ သူက ယခုကဲ့သို့ပြောသည်။
“စစ်တွေမှာ မိုးအရမ်းရွာနေပါတယ်။ လမ်းပေါ်ကို လူထွက်လို့ မရအောင်ထိ မိုးရွာနေပါတယ်။ ခုချိန်ထိ တစုံတရာ ထူးခြားမူကတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လို့ လူတွေကတော့ ဒေါ်စုကို နအဖ စစ်အစိုးရ ထောင်ချမယ်ဆ်ိုပြီးတော့ ပြောနေကြပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
တခြား ရဲစခန်းနဲ့ နီးစပ်သူ တဦးက မေးကြည့်ရာ သူက “ခုရက်ပိုင်း အတွင်းမှာ ရဲသားတွေကို စတန်းဘိုင် (Standby) အနေအထားနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။ ညမှာဆိုရင် ညလုံးပေါက် ရဲသားအများအပြားကို ချထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ချရင် တခုခု ဖြစ်နိင်တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက တွက်ဆထားပုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ စစ်တပ်နဲ့ လုံထိန်းတွေရဲ့ လူပ်ရှားမူတွေတော့ မတွေ့ ရသေးပါဘူး။” ဟု ပြောသည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံ၊ ဘုရားကြီးနှင့် လောကာနန္ဒာစေတီတွင် လုံခြုံရေးများမှာမူ ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေပြီး လူအများ၏ သွားလာ လှုပ်ရှားမူကို အမြဲမပြတ် စောင့်ကြည့်နေသည်ဟု သိရသည်။
တခြား နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်စပ်သူ တဦးမှလည်း ရိုးရိုး အ၀တ်ဖြင့် ထောက်လှမ်းရေးများမှာ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် တချို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကို စောင့်ကြည့်မူများ ရှိနေသည်ဟု ပြောသည်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ July,30th,2009
( 56 )ဖားကန့်ရှိ အိမ်ခြေ ၁၀၀ ခန့်ကို အာဏာပိုင်များက ဖျက်သိမ်းခိုင်းနေ
( 55 )Lack of Factories and Mills Cause Youth Migration
( 54 )Most Arakanese prefer travelling by ships
( 53 )အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ မေးခွန်းထုတ်ခံနေရ
( 52 )Burmese PM Vows Green, Secure Energy
( 51 )သိန်းနှင့်ချီသည့် မြန်မာများ ထိုင်းတွင် အလုပ်သမား လက်မှတ်ပြုလုပ်
( 50 )Doctors Criticize Burmese Junta Flu Policy
( 49 )ဒေါ်စု အမှုကို ဥပဒေ လမ်းကြောင်းအရ အစွမ်းကုန်လုပ်မည်ဟု အဖွဲ့ချုပ်ကပြော
( 48 )အမေရိကန် အစိုးရက ကုန်သွယ်ရေး ဒဏ်ခတ်မှု သက်တမ်း တနှစ်တိုး
( 47 )ဒေါ်စု အမှုအတွက် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အလွန်စိုးရိမ်နေ
( 46 )Myanmar court likely to find Aung San Suu Kyi guilty, observers say
( 45 )ဒေါ်စု အမှု စီရင်ချက် တရားမျှတမှာ မဟုတ် ပြည်သူလူထုပြော
( 44 )Is China Playing Safe with its Burma Pipeline Plan?
( 43 )ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူ၏ အယူခံကို တရားရုံးက လက်ခံ
( 42 )ဒေါ်စု အမှုအပေါ် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၏ သဘောထား
( 41 )World Wants Suu Kyi Free
( 40 )World awaits Suu Kyi verdict
( 39 )မြန်မာနိုင်ငံတွင် A(H1N1) တုပ်ကွေးဖြစ်သူ (၁၀) ဦးရှိပြီ
( 38 )Suu Kyi braces for the worst ahead of verdict
( 37 )အကြီးမားဆုံး ဘင်္ဂလာ စစ်သားများကို စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်မှ ရုတ်သိမ်းမည်
( 36 )Snr-Gen Than Shwe rejects KIO's demands
( 35 )စာပေဟောပြောပွဲတက်ရန် ရပ်ကွက်လူထုကို ဖိအားပေး
( 34 )မိုးလေဝသကြောင့် အမြန်ရေယာဉ် ပြေးဆွဲမှု ရပ်နား
( 33 )EU’s next president meets Karen
( 32 )မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူးနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ ကချင်တပ်အရေး ဆွေးနွေး
( 31 )Crops destroyed by grasshoppers in Chin state
( 30 )လူတုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားသူ ထပ်မံ တိုးလာနေ
( 29 )Poisonous snakes abound in Chin State post famine
( 28 )အမှုကို ခန့်မှန်းပြောခြင်းသည် `တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြုမှု´ ဟု မြန်မာ့အလင်းတွင် ဖော်ပြ
( 27 )Chairman of Chin State bars foreign aid
( 26 )Suu Kyi 'preparing for the worst'
( 25 )ရေဘေးသင့်ဖားကန့်မြို့ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်အား နေရာရွှေ့ပြောင်းခိုင်း
( 24 )Govt warns against protests
( 23 )မြန်မာစစ်အစိုးရကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အမေရိကန်သမ္မတ သက်တမ်းတိုး
( 22 )Myanmar bar on Suu Kyi verdict prediction
( 21 )ကတိနဲ့အညီ အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ဖို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်း
( 20 )Suu Kyi supporters brace for the worst
( 19 )အာဆီယံ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးများ မန္တလေးမှာ ဆွေးနွေး
( 18 )မြန်မာပြည်မှာ A (H1N1) ရောဂါပိုးရှိသူ ၉ ဦး ရှိပြီဟု စစ်အစိုးရ ပြောဆို
( 17 )my tribute to Burma's opposition leader, Aung San Suu Kyi
( 16 )တောင်ပြုန်းနတ်ပွဲသို့ သွားရောက်သူဦးရေ ကျဆင်း
( 15 )တာချီလိတ် မူးယစ်ဆေးဝါးနောက်ဆက်တွဲ ဒေသခံအများအပြားခေါ်ယူစစ်ဆေး/ငွေညှစ်ခံရ
( 14 )Burma Superstar's new Temescal locationahit
( 13 )ကော့သောင်းနယ်စပ် ညအချိန် ကူးဖြတ်မှု ပိတ်ပင်
( 12 )my tribute to Burma's opposition leader, Aung San Suu Kyi
( 11 )တရား စီရင်ရေးကို ဒေါ်စုက ဝေဖန်၊ ခြံထဲကမြေကို အမျိုးကရောင်း
( 10 )Ministers call for closer energy cooperation
(9)ဒေါ်စု လွှတ်မြောက်ရေး အတွက် ရုံးချိန်းနေ့ နှင့် အင်္ဂါနေ့တွင် ၀တ်ပြုဆုတောင်း
( 8 )Icon of democracy awaits her fate in Rangoon
(7)အောင်လံက တောင်သူ တချို့ တရားရင်ဆိုင်နေရ
(6)Burma warns against predicting Suu Kyi verdict
(5)လူတုပ်ကွေး ကူးစက်ခံရသူ ၇ ဦး ရှိပြီး ၄ ဦး သက်သာ၍ ဆေးရုံးဆင်း
(4)Don’t predict Suu Kyi’s verdict’
(3)စစ်အစိုးရအပေါ် အမေရိကန် ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှု သက်တမ်း ထပ်တိုး
(2)East Asian energy ministers call for closer regional energy co-op
( 1 )Chinese official calls for strengthening energy co-op
ဇာနည်ဝင်း Wednesday, 29 July 2009
ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် သည် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံရစဉ် ရုပ်ဖျက်ပြီး ထွက်ပြေးရန် ကြိုးစားခဲ့ဖွယ်ရှိသည်ဟု ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်း စာ များ တွင် ရေးသားထားသည်။
လူထုအုံကြွမည်စိုး၍ အကျဉ်းကျ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များထောင်ပြောင်း
ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)/ ဇူလှိုင် ၂၉၊ ၂ဝဝ၉
ကရင်နီပြည် လွိုင်ကော် ထောင်ရှိ ထောင် အာဏာပိုင် များက ထောင် အတွင်း လူထုအုံကြွမှုဖြစ် မည်ကို စိုးရိမ်ကာ ဖမ်းဆီး အကျဉ်း ချ ထား ခြင်း ခံရသော ကယန်းလူငယ် ခေါင်းဆောင်သုံးဦးအား လွိုင်ကော်နှင့် ဝေးလံသည့် နယ်ထောင်များဘက်သို့ ပြောင်းရွေ့ လိုက် သည် ဟု ကရင်နီလူငယ်အဖွဲ့ကပြောသည်။
“ပြောပုံအရ ထောင်ထဲမှာနေတာ နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောတယ်၊ ထောင်ထဲမှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာ တွေသင်ပေး တယ်၊ လူ့အခွင့်အရေး အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဆွေးနွေးပြောဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒါကို ထောင် အာဏာပိုင်တွေက တခါနှစ်ခါ သတိပေးတာရှိ တယ်” ဟု ကရင်နီလူငယ်အဖွဲ့ (ကေအဲန်ဝိုင်အို) မှ တာဝန်ခံ တဦးကပြောသည်။
ကယန်းမျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအဖွဲ့ (ကေအဲန်ဂျီဝိုင်)နှင့် ကယားပြည်နယ် လူငယ်များအဖွဲ့ (ကေအစ်ဝိုင်) မှ ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသော ကေကောရီယို အား မိတ္ထီလာထောင်၊ ခွန်ဘီးဒူ (ခေါ်) လွီးဇီငြိမ်း ကို တောင်ငူ ထောင်နှင့် ဒီးဒီ အား မန္တလေးထောင်းသို့ ယခုဇူလှိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင်ပို့ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ထင်တာကတော့ ထောင်အတွင်းရေးပြဿနာတွေ ပေါက်ကြားလို့ပဲထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရင်တုန်းက ထောင်တွင်းရေး ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ ထောင်မှူးတွေရဲ့ ချစား လာဘ်စားမှုတွေ ကျနော်တို့ သတင်းအချက်အလက် သိရတယ်လေး” ဟု ကေအဲန်ဂျီဝိုင် မှ တာဝန်ရှိလူငယ်တဦးက ပြောသည်။
ထောင်မှူးများ၏ လာဘ်စားခြင်း သတင်းများ ထွက်ရှိပြီးနောက်တွင် ယခုလိုပြဿနာများ ထွက်ရှိလာပြီး ထောင်တွင်းရှိသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်မရသည့်အပြင် တိုက်ပိတ်ထားခြင်း ခံရပါသည်။
၎င်းတို့သုံးဦးသည် ၂ဝဝ၈ မေလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်အစိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း အတည်ပြုရေး လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ မတိုင်ခင်က ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်ရန် ဦးဆောင်ပြီး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ၊ ကန့်ကွက်မဲ လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ခြင်းများကြောင့် ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု၊ နှောက်ယှက်မှု၊ သူပုန်နဲ့ ဆက်သွယ်မှု၊ တရားမဝင် ဆက်ထလိုက် ဖုန်းများ အသုံးပြုမှု စသည့် ပုပ်မများနှင့် ထောင်ဒဏ် ၃၇ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုလို ထောင်အသီးသီးသို့ ပြောင်းရွေ့ခြင်းခံလိုက်ရသောကြောင့် အဆုတ်အတွင်းသို့ ရေဝင်သည့်အပြင် ကျောက်ကပ်၊ အစာအိမ်မကောင်းသော ကေကောရီယိုအတွက် စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ကြသည်ဟု ကေအဲန်ဝိုင်အို မှတာဝန်ခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “အဲဒီ မိတ္ထီလာထောင်က တော်တော်လေးဆိုးတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ထောင်သားတွေကို အရမ်း နှိပ်စက်တယ်။ ခိုးဆိုးနှိုက်တဲ့လူ၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ လူတွေများထယ်။ သူ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အရမ်း စိုးရိမ်ရတယ်” ဟုပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ၏ နေအိမ်ခြံ ၀င်း အတွင်း ရှိမြေ စိတ်ပိုင်း ရောင်းချ ထားခြင်း ကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သိရှိ ထားပြီး သူ့ ရှေ့နေများ ကို လိုအပ် သလို ဆောင်ရွက် ရန် ညွှန်ကြား ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်း က ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောင်ကျလိမ့်မည်ဟုဦးဝင်းတင် ထင်မြင်ယူဆ
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဝင်းတင်က “ထောင်ကျနိုင်မယ်ဆိုတာက နဂိုကတည်းက ထောင်ချချင်လို့ လုပ်တာပဲ။ ထောင်ချချင်လို့ လုပ် တာမဟုတ်ရင် ဒီကိစ္စပေါ်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ တရားဥပဒေအရပဲ ကြည့်ကြည့်၊နိုင်ငံရေးအရပဲ ကြည့်ကြည့် ပေါ်စရာ အကြောင်း မရှိဘူး” ဟု ပြောသည်။
၁၉၂၉ ခုနှစ် အမေရိကန် စီးပွားပျက်ကပ်ကာလ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတွင်း ရာဇဝတ်မှုများမှာ အလွန်ပင် ထူပြောလာခဲ့သည်။ အိုက်(စ)ကရင်လို မုန့်မျိုးကိုပင် အလစ်သုတ်မှုမှအစ ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှုများအထိ ရှိခဲ့သည်။ ချီကာဂိုတွင် အကောင်းစားဟိုတယ်တခု ငှားရမ်းပြီး ရုံးခန်းဖွင့်ကာ ရာဇဝတ်မှုများကို ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတခုကဲ့သို့ တိကျသေချာစွာ ဆောင်ရွက်သွားခဲ့သည့် ထိပ်တန်းအမေရိကန် မာဖီးယား အယ်(လ)ကပုန်းကဲ့သို့ပင် အမေရိကန် သမ္မတကိုယ်တိုင် ပြည်သူ့ရန်သူ (Public Enemies) အဖြစ် ကြေညာပြီး အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန်အတွက် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုခန့် အချိန်ယူခဲ့ရသည်။
ထိုအချိန်က အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူများ၏ ရွှေခတ်ဟု သတင်းစာများက တင်စားရလောက်အောင်ပင် ချီကာဂို၊ နယူးယောက် စသည့် မြို့ကြီးအချို့တွင် ရာဇဝတ်မှုများမှာ ပေါများခဲ့သည်။ ဥပဒေဘောင်အပြင်ဘက်မှ မြေအောက်လောကသားများက ခွေးဘီလူးဟု ကင်းပွန်းတပ်ခဲ့ကြသည့် FBI ၏ သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သည့် အက်ဂါ ဟူးဗားက ရာဇဝတ်မှု စစ်ဆင်ရေးစစ်ပွဲဟု အမည်ပေးကာ စုံထောက်အင်အား များစွာသုံးပြီး ချေမှုန်းခဲ့ရသည်။
အယ်(လ)ကပုန်းကဲ့သို့ပင် ထိုအချိန်က နာမည်ကျော် ဘဏ်ဓားပြနှင့် ထောင်ဖောက်မှုများ အကြိမ်ကြိမ် ကျူးလွန်သူတဦးဖြစ်သည့် ဂျွန်ဒလင်ဂျာမှာ အုပ်စုဖွဲ့၍ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူတဦးဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ရန်သူ နံပါတ် ၁ အဖြစ် ကြေညာခဲ့ရသည်။
ထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးမှု ၂ ကြိမ်အထိ ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး၊ သူ မသေဆုံးခင်အထိ ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှု နှစ်ဒါဇင်ထက်မနည်း ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ရဲစခန်း ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုများနှင့် ရဲအရာရှိ ပေါင်းများစွာမှာ သူ့လက်ချက်ကြောင့် အသက်ပျောက်ခဲ့ရသည်။
စတင်ဖွဲ့စည်းခါစ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ကို ယူထားရသည့် FBI အဖွဲ့မှာ ကျယ်ပြန့်၍ ကျစ်လစ်စွာ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဂျွန်ဒလင်ဂျာနှင့် အဖွဲ့ကို နှိမ်နင်းနိုင်ရန်အတွက် အမှုလိုက် အတွေ့အကြုံရှိသည့် နာမည်ကျော် စုံထောက်များကို အားကိုးခဲ့ရသည်။
ထိုအချိန်က FBI ၏ အရှင်သခင်တဦးဖြစ်သည့် အက်ဂါဟူးဗားမှာ ဂျွန်ဒလင်ဂျာနှင့် အဖွဲ့ကို ဖမ်းဆီးရနိုင်ရန် အထူးယူနစ်တခုကို တည်ထောင်ခဲ့ရသည်။ ထိုအထူးယူနစ် အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သည့် စုံထောက် မယ်ဗင် ပါဗစ်မှ ဂျွန်ဒလင်ဂျာနှင့် သက်တူရွယ်တူဖြစ်ပြီး နောင်အခါတွင် ဒလင်ဂျာကို ဇီဝိန်ချွေနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒလင်ဂျာကို FBI စုံထောက်များက အသေဖမ်းဆီးမိနိုင်သည့် သတင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်သာမက တကမ္ဘာလုံးက စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ၁၉၃၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် သေဆုံးခဲ့သည့် ဒလင်ဂျာ၏ သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံကို ထိုစဉ်က မြန်မာသတင်းစာများ၏ ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် ရေးသားကြကုန်လေသည်။
တချိန်က ရာဇဝင်လူဆိုးကြီး ဒလင်ဂျာအကြောင်းကို စာအုပ်အဖြစ်၎င်း၊ ရုပ်ရှင်အဖြစ်၎င်း ဖန်တီးခဲ့ကြဖူးပြီး ယခုလဆန်းပိုင်းက အမေရိကန်တွင် ရုံတင်ခဲ့သည့် Public Enemies ဇာတ်ကားမှာ လူဆိုးကြီး ဂျွန်ဒလင်ဂျာနှင့် အပေါင်းအပါတို့၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းဖြစ်သည်။
ဂျွန်ဒလင်ဂျာအဖြစ် ဂျွန်နီဒပ်က သရုပ်ဆောင်ပြီး FBI စုံထောက်ကျော် မယ်ဗင် ပါဗစ်အဖြစ် ခရစ်တီးယန်း ဘေးက သရုပ်ဆောင်သည်။ Heat နှင့် Collateral ဇာတ်ကားများကို ရိုက်ကူးခဲ့သည့် မိုက်ကယ်မန်းက ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
The JackRabbit ဟု မြေအောက်လောကသားများက ခေါ်ကြသည့် ဂျွန်ဒလင်ဂါကို ၁၉ဝ၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ထွက် အင်ဒီယားနားပြည်နယ် အင်ဒီယာနာပိုလစ်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကျောင်းနေအရွယ်ကပင် ဆိုးမိုက်တတ်သည့် ဗီဇဉာဉ်ပါလာသောကြောင့် အတန်းဖော်များနှင့် မကြာခဏ ပြဿနာတက်လေ့ရှိသည်။
လုယက်မှု၊ အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရအောင် ရိုက်နှက်မှုနှင့် ရာဇဝတ်မှုတခုကြောင့် ထောင်ထဲတွင် ၈ နှစ်ခွဲခန့် နေခဲ့ရသည့် ဒလင်ဂျာမှာ ထောင်မှ လွတ်လျှင်လွတ်ခြင်း အိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်ရှိ ဘလဖ်တွန်ဘဏ်တိုက်ကို လက်နက်ကိုင် ဖောက်ထွင်းခဲ့ပြန်သည်။ ထိုဘဏ်ဖောက်လုယက်မှုကြောင့် နောက်ထပ်တကြိမ် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံနေရသည့် ဒလင်ဂျာမှာ ၁၉၉၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် သူ၏ တပည့်တပန်းများဖြစ်သည့် ဟာမီတန်၊ မက်ကေး၊ ပီယာပွန့်က ထောင်ပြောင်းရွှေ့ရန် လာရောက်သည့် အာဏာပိုင်များအဖြစ် ထောင်တွင်းသို့ အယောင်ဆောင်ဝင်လာကာ ဒလင်ဂျာအား ထောင်အနုကြမ်းစီး၍ ကယ်ထုတ်သွားနိုင်ခဲ့ပုံဖြင့် Public Enemies ဇာတ်ကားကို ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ဒလင်ဂျာ၏ လက်ဦးဆရာဖြစ်သူ ဝေါ်လ်တာမှာမူ ထောင်ဖောက်ပွဲတွင် ထောင်အာဏာပိုင်များ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျဆုံးသွားခဲ့ရသည်။ ဒလင်ဂျာအား ကယ်ထုတ်သွားခဲ့သူများမှာလည်း လွန်ခဲ့သည့် ၁ဝ ရက်လောက်ကမှ ထောင်ကိုစီးနင်း၍ ထွက်ပြေးလာသူများဖြစ်ပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် သူ့ဆရာကို လာကယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးမှုတွင် လွတ်မြောက်သွားသည့် ဒလင်ဂျာ၏ ဂိုဏ်းသားအချို့မှာလည်း နောင်တွင် အမေရိကန်၏ နာမည်ကျော် လူဆိုးကြီးများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒလင်ဂျာတို့ ထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးမှုသည် သတင်းစာများတွင် ပါရှိလာသောအခါ FBI ညွှန်ကြားရေးမှူး အက်ဂါဟူးဗားကလည်း စုံထောက်များကို စေလွှတ်ပြီး ထောင်ဖောက်ဝရမ်းပြေးတို့ ခိုအောင်းလေ့ရှိသည့် နေရာများကို ဝင်ရောက်ရှာဖွေစီးနင်းခိုင်းသည်။
တနေ့ FBI စုံထောက်ကျော်တဦးဖြစ်သည့် မယ်ဗင် ပါးဗစ်နှင့် အဖွဲ့က နာမည်ကျော် ဒုစရိုက်သမားတဦးဖြစ်ပြီး ဒလင်ဂျာတို့ ထောင်ဖောက်မှုတွင် တနည်းတဖုံ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု ယူဆရသည့် Preety ‘Boyd Floyd ကို အသေပစ်သတ်နိုင်ခဲ့ရာ အက်ဂါ ဟူးဗားက သူ့ကို ချီကာဂိုမြို့၏ FBI အကြီးအကဲအဖြစ် ရာထူးတိုးပေးခဲ့သည်။
ထောင်ဖောက်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည့် ဒလင်ဂျာနှင့် သူ့အဖွဲ့သားများမှာ ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှု၊ ငွေတိုက်ဝင်စီးမှု၊ လက်နက်တိုက်ဝင်စီးမှု၊ ရဲစခန်းစီးနင်းမှုများကို အနောက်အလယ်ပိုင်း
ပြည်နယ်များတွင်သာမက ဖလော်ရီဒါနှင့် အရီဇိုးနယ်ပြည်နယ်များထိပါ ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သည်။
ဒလင်ဂျာ ခိုအောင်းနေသည်ဟု သတင်းရရှိသည့် နေရာတခုကို မယ်ဗင် ပါဗစ်နှင့် အဖွဲ့ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရာ သူတို့အဖွဲ့ထဲမှ စုံထောက်အချို့မှာ ဒလင်ဂျာ၏ ဂိုဏ်သားများက ခုခံပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ပြီး ပုန်းအောင်းနေသူမှာလည်း ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသည်။
FBI အဖွဲ့၏ အကျအဆုံးများလှသော ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှု မအောင်မမြင် ဖြစ်သွားပြီးနောက်တွင် အက်ဂါ ဟူးဗားကို မယ်ဗင်က တောင်းဆိုမှုတရပ် ပြုလုပ်သည်။ တရားရေး မဏ္ဍိုင်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များက အသေရရ အရှင်ရရ အမိန့်ထုတ်ပြီးပြန်ပါမှ သူ့အနေဖြင့် ဒလင်ဂျာကို အသေပစ်ဖမ်းခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ (အမေရိကန် အချို့ပြည်နယ်များ၏ ဥပဒေ အရ ထိုအချိန်က တရားခံများကို အသေပစ်ဖမ်းခွင့် မရှိချေ။ ပြည်နယ်ကျော်၍ ဖြစ်ပွားသော မှုခင်းများကိုသာ ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းထောက်လှမ်ရေး ဝန်ထမ်းများက လိုက်လံ၍ စုံစမ်းထောက်လှမ်းနိုင်သည်)။ ဒလင်ဂျာတို့အဖွဲ့ထဲရှိ Baby Face Nelson မှာ ပါဗစ်တို့ ဖမ်းဆီးမှုမှ လွတ်မြောက်သွားပြီးနောက် နိုင်ငံအနှံ့ ရာဇဝတ်မှုများ ဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေသည့် ဒလင်ဂျာမှာ အီဗလင် ဖရန့်ချက်ဆိုသည့် အပျော်မယ်တဦးနှင့် မေတ္တာသက်ဝင်မိသွားသည်။ အစက ဒလင်ဂျာကို
နာမည်ကျော် ဝရမ်းပြေးတဦးမှန်း မသိသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဒလင်ဂျာအတွက် အကောင်းဆုံး အဖော်မွန် ဖြစ်ခဲ့သည်။ (ဖရန့်ချက်မှာ ဒလင်ဂျာကို ကူညီမှုကြောင့် ထောင်ကျခဲ့ပြီး သူထောင်မှ လွတ်သည့် အချိန်တွင် ဒလင်ဂျာလည်း သေဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ ဒလင်ဂျာနှင့် သူ၏ ချစ်ဇာတ်လမ်းကို Confession of True Romance အမည်ဖြင့် စာအုပ်တအုပ် ရေးသားခဲ့သည်)။
ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှု၊ လက်နက်တိုက်စီးမှုများဖြင့် FBI က အလိုရှိနေပြီး အမေရိကန်တွင်လည်း တစထက်တစ နာမည်ကြီးလာသည့် ဒလင်ဂျာမှာ အရီဇိုးနားပြည်နယ် တခ်ဆန်မြို့ရှိ ဟိုတယ်တခုတွင် ပုန်းအောင်းနေခိုက် ဟိုတယ်မီးလောင်မှုကြောင့် ဆွမ်းခံရင်း ငှက်သင့်ဖြစ်ကာ စုံထောက်များ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရပြန်သည်။ ထောင်ကို စီးနင်း၍ ထွက်ပြေးမှုကြောင့် သူ့ကို လုံခြုံရေး တင်းကျပ်စွာ ချထားသော အင်းဒီယားနား ပြည်နယ်တွင်းရှိ ကရောင်းပွိုင့် အကျဉ်းထောင်တွင် ဖမ်းဆီးထားသော်လည်း သူ့ အပေါင်းအဖော် အချို့နှင့်အတူ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြန်သည်။
ဒလင်ဂျာအား ဖမ်းဆီးထားရာ ထောင်ကြီးမှာ လုံးဝမလွတ်မြောက်နိုင်သည့် (Escape Proof) ဟု ခေါ်သည့် အထူးထောင်မှ ဒလင်ဂျာသည် လွတ်မြောက်အောင် ကြံဆောင်နိုင်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် ထောင်ဖောက် ထွက်ပြေးလာနိုင်သည့် ဒလင်ဂျာမှာ အမေရိကန် မြေအောက်လောကတွင် သြဇာအရှိဆုံး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည့် ဒလင်ဂျာတို့ အုပ်စုကို ချီကာဂို အခြေစိုက် မာဖီးယားခေါင်းဆောင် အယ်ကပုန်းက သူ့လူ Frank Nitti မှတဆင့် လုံခြုံစိတ်ချသော နေရာတွင် နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အကူအညီပေးထားသည်။
ထောင်မှထွက်ပြီး မကြာခင်ပင် ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှုတခု ကျူးလွန်ရာ အစောင့်ရဲတို့နှင့်
ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး ဒလင်ဂျာ လက်မောင်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ကျန်ရစ်ခဲ့သော သဲလွန်စများအရ လွတ်မြောက်သွားသူမှာ ဒလင်ဂျာ မဟုတ်ဘဲ နောင်တွင် ဒလင်ဂျာကဲ့သို့ပင် Public Enemy နံအပတ် ၁ တဦး ဖြစ်လာမည့် Baby Face Nelson ဆိုသူမှန်း သိလိုက်ရသည်။
ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွင် ဒလင်ဂျာ လွတ်မြောက်သွားခဲ့သော်လည်း နောက်ထပ် ခြေရာခံ၍ ဖမ်းဆီးရမိသော ဂိုဏ်းသားတဦး၏ မသေခင် ဖြောင့်ချက်အရ ဒလင်ဂျာတို့မှာ ဘိုဟေးမီးယန်း အပန်းဖြေ ရွာငယ်လေးတွင် ခိုလှုံနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ FBI စုံထောက်များက ဒလင်ဂျာရှိ မည်ထင်သော နေရာသို့ ကားမီးများမှိတ်၍ တရွေ့ရွေ့လာစဉ် ဆီးကြိုပစ်ခတ်ခံရသဖြင့် စုံထောက်များမှာ အသက်လုပြေးရပြန်သည်။
ဘိုဟေးမီးယန်းရွာ ညတိုက်ပွဲတွင် နှစ်ဖက်စလုံးမှ ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် အရပ်သားများနှင့် စုံထောက်အချို့ပါ သေဆုံးခဲ့ကြသော်လည်း လယ်သမားတဦး၏ ကားကို ခိုး၍ ထွက်ပြေးသွားသော ဒလင်ဂျာတို့အဖွဲ့တွင်မူ ဟာမီလ်တန်သာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ (ဟာမီလ်တန်လည်း နောက်တနေ့တွင် ထို သေနတ်ဒဏ်ကြောင့်ပင် သေဆုံးခဲ့သည်)။ Baby Face Nelson က ထွက်အပြေးတွင် ပြန်လှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် စုံထောက်တဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ နယ်(လ)ဆင်နှင့် ဗန်မီတာတို့မှာ FBI ကားကိုပင် ပြန်ပေးဆွဲပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။
လွတ်မြောက်သွားသော ဒလင်ဂျာမှာ သူ၏ မြာဖြစ်သူ ဖရန့်ချက်နှင့် တွေ့နိုင်ရန် စီစဉ်သလို တဖက်တွင်လည်း စုံထောက်တို့က ဖမ်းဆီးထားသော ဖရန့်ချက်အား တွေ့ဆုံ၍ ဒလင်ဂျာရှိသည့် နေရာကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားရန် စစ်မေးလေသည်။ ယခင်လို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် မနေရဲတော့သည့် ဒလင်ဂျာကမူ အယ်ဗင်၏ ဘေကာဂိုဏ်းနှင့် တိုင်ပင်ပြီး မီးရထားတွဲကို အပိုင်စီးရန်ပင် စီစဉ်လိုက်သေးသည်။
ဒလင်ဂျာနှင့်ပတ်သက်သည့် သဲလွန်စကို အမေရိကန်တွင် ပြည့်တန်ဆာအဖြစ်
သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေသည့် ရိုမေးနီးယားသူ အန်နာက FBI သို့ သတင်းပို့လိုက်သည်။
အမေရိကန်သို့ ခိုးဝင်လာသော အန်နာမှာ ရိုမေးနီးယားသို့ ပြန်ပို့ခံရမည့်အရေးကို ရှောင်လွှဲလိုသဖြင့် FBI စုံထောက်များနှင့် အပေးအယူတခု ပြုလုပ်လေသည်။ ဒလင်ဂျာ ရှိသော နေရာကို သူမ သိသည်။ “အကယ်၍ သူ့ကို ပြည်နှင်ဒဏ် မပေးပါက ဒလင်ဂျာကို ဖမ်းဆီးနိုင်မှုတွင် ကူညီမည်ဟု ပြောသည်။ FBI စုံထောက်များနှင့်် အန်နာ ဈေးညှိပြီးနောက်တွင် ဒလင်ဂျာနှင့် သူ ယခုလက်ရှိ တွဲနေသည့် အန်နာ့သူငယ်ချင်း
ပိုလ်လီဟာလ်မီတန်ဆိုသည့် အပျော်မယ်နှင့် ချီကာဂိုတွင် ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရန် အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု သတင်းပေးလိုက်သည်။
အန်နာက ဒလင်ဂျာအနေဖြင့် မည်သည့်ရုံတွင် သွားကြည့်မည်ဟု အတ်ိအကျ မသိသော်လည်း နောက်တနေ့တွင် သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် သတင်းထပ်မံပေးပြန်သည်။
ရဲအရာရှိပေါင်းများစွာအပြင် FBI ထိပ်တန်းစုံထောက်ပေါင်းများစွာ အသက်စွန့်၍ ဖမ်းသော်လည်း ဒလင်ဂျာ၏ အရိပ်ပင် မမြင်လိုက်ရသဖြင့် အန်နာ၏ ဒလင်ဂျာလို ထိပ်တန်းလူဆိုးတဦးကို ရုပ်ရှင်လာကြည့်ချိန်တွင် ကြက်ကလေး၊ ငှက်ကလေးဖမ်းသလို ဖမ်းဆီးရနိုင်မည့် စီမံကိန်းမှာလည်း ဝါရင့်စုံထောက်များအတွက် ယုံရခက်ကြီး ဖြစ်နေသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေတွင် အန်နာ၏ နောက်ဆုံးသတင်းပေးပို့ချက်
ဖြစ်သည့် ဒလင်ဂျာနှင့် ဟာမီလ်တန် အပါအဝင် သူမပါ မာလ်ဘိုရို ရုပ်ရှင်ရုံ (သို့မဟုတ်) ဘိုင်အိုဂရဖ်ရုံတွင် ထိုညပွဲကို သေချာပေါက် ကြည့်ရှုမည်ဟု သတင်းပေးလိုက်သည်။
FBI ညွှန်ကြားရေးမှူး အက်ဂါဟူးဗားကမူ ဒလင်ဂျာကို ဖြစ်နိုင်လျှင် အရှင်ဖမ်းမိနိုင်အောင် စုံထောက်များအား လမ်းညွှန်မှုပေးပြီး ဒလင်ဂျာဖြစ်ကြောင်း သေချာလျှင်မူ လုံးဝ လွတ်ထွက်မသွားစေနှင့်ဟု အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အန်နာ၏ နောက်ဆုံးဖုန်းသတင်း ဝင်ချိန်မှစ၍ ချီကာဂိုတမြို့လုံးရှိ စုံထောက်များမှာ ထိုရုပ်ရှင်ရုံနှစ်ရုံအနီးတွင် အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
ဒလင်ဂျာနှင့်အတူ ရုပ်ရှင်ကြည့်မည့် အန်နာက သူမသည် အနီရောင်ဝမ်းဆက်ကို ဝတ်ဆင်၍ ဒလင်ဂျာနှင့် အတူလာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း စုံထောက် မယ်(လ)ဗင်ပါဗစ်ကို ထင်ရှား၍ မြင်လွယ်သော အမှတ်သင်္ကေတ ပြုခဲ့သည်။
နောက်ဆုံး အနှစ်ချုပ်လိုက်သော် စုံထောက်များနှင့် အပေးအယူပြုပြီး သူမကို ရိုမေနီးယန်း ပြန်မပို့ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည့် ပြည့်တန်ဆာ အန်နာမှာလည်း ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် ရိုမေနီးယန်းသို့ ပြန်ပို့ခံခဲ့ရသည်။ ဒလင်ဂျာကို ဖမ်းမိနိုင်ရန်အတွက် ဘိုင်အိုဂရဖ်ရုံတွင် အနီရောင် ဝတ်စုံဝတ်ဆင်၍ ထိုအချိန်က နာမည်ကျော် မင်းသား ကလပ်ဂေဘယ်၏ Manhattan Melodrama ဇာတ်ကားကို ကြည့်ရှုခဲ့သည် အန်နာကို
အမေရိကန် သတင်းစာများက Lady in Red ဟု ခေါင်းစဉ်တပ် ရေးသားကြကုန်သည်။
ဒလင်ဂျာကို ပထမဦဆုံးအကြိမ် ထောင်ဖောက်ကယ်ခဲ့သည့် ပီယာပွန့်တို့ လူစုမှာလည်း သေမိန့်ကျခဲ့သည်။ Baby Face Nelson မှာမူ ဒလင်ဂျာ သေပြီးနောက် တနေ့တွင် ဒလင်ဂျာ နေရာကို ဆက်ခံ၍ Public Enemies Number 1 ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒါရိုက်တာ မိုက်ကယ်မန်း၏ Public Enemies ဇာတ်ကားမှာ ရွှေပွဲလာများ ရှုမညီးရအောင် တင်ဆက်ထားသော်လည်း လူဆိုးကြီး ဒလင်ဂျာ၏ တကယ့် ဘဝနှင့် အတော်ပင် ကွဲလွဲသည်ဟု ဆိုသည်။
ဒလင်ဂျာနှင့် သူ၏ ချစ်သူ ဖရန့်ချက်တို့ တွေ့ဆုံပုံမှာလည်း တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်တွင် ရုပ်ရှင်ထဲကလိုမျိုး မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။ FBI စုံထောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သည့် ခရစ်တီးယန်းဘေးမှာ ဒလင်ဂျာအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သည့် ဂျွန်နီဒပ်နှင့် ယှဉ်လိုက်လျှင် သရုပ်ဆောင်မှုအစွမ်း နည်းနည်းလိုသေးသည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။
ဒလက်ဂျာ၏ ချစ်သူ အီဗလင်ဖရန့်ချက်အဖြစ် မာရီယွန် ကော့တီလဒ်က သရုပ်ဆောင်သည်။ Baby Face Nelson အဖြစ် စတီဖင် ဂရေဟမ်က သရုပ်ဆောင်သည်။ FBI ၏ ပထမဆုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် အက်ဂါ ဟူးဗားအဖြစ် ဘီလီ ခရပ်ဒပ်က သရုပ်ဆောင်သည်။ ဟိုမား ဗန်မီတာအဖြစ် စတီဖင် ဒေါဖ်က သရုပ်ဆောင်သည်။
မြေအောက် ဒုစရိုက်လောကတွင် ပြောစမှတ်တွင်ကျန်အောင် ဆိုးသွမ်းခဲ့သည့် ဒလင်ဂျာ သေဆုံးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေရာ ရောင်းမလောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်အဖြစ်လည်း အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။
ယခု ရုံတင်ပြသနေသည့် Public Enemies ဇာတ်ကားမှာ စာရေးဆရာ ဘရိုင်ယန် ဘောရိုး ရေးသားသည့် Public Enemies : American Greatest Crime Wave and The Birth of FBI 1933 - 43 စာအုပ်ကို မှီငြမ်းရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၂၉ အမေရိကန် စီးပွားရေး မျက်ဖြူဆိုက်ကာလတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ထိပ်တန်း ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူများအကြောင်းကို ယခုတဖန် ခေတ်သစ် စီးပွားပျက်ကာလတွင် ရိုက်ကူးပြသဖြင့် ဆင်ခြင်စရာနှင့် သံဝေဂယူစရာ ကောင်းသည်ဟု အမေရိကန် အမျိုးသားတို့က ဆိုသည်။
ဒလင်ဂျာမှာ တဖက်တွင် နာမည်ဆိုးသော်လည်း သူ့ကြောင့် ထိုအချိန်က အမေရိကန်တို့က ဘဏ်တွင် ငွေမအပ်ရဲတော့ဘဲ ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်စားသောက်သဖြင့် စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထူလာနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
အာဏာပိုင်များက အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များကို အကြောင်းပြချက်...
ဒေါ်စုအမှု စိတ်ဝင်စားသူများ အင်းစိန်ထောင်အနီးစုရုံးခ...
ဒေါ်စုကို စီရင်ချက် ချမည့်နေ့ကို သြဂုတ် ၁၁ သို့ ရွှေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ - (အပိုင်း ၁...
ဒေါ်စုကို ထောင်ချလျှင် တိုက်ပွဲဝင်ရန် လှုံ့ဆော်စာမျာ...
DKBA နှင့်နအဖပူးပေါင်းတပ်များ KNUတပ်မဟာ ၆ ဧရိယာသို...
လူထုအုံကြွမည်စိုး၍ အကျဉ်းကျ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များထေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောင်ကျလိမ့်မည်ဟုဦးဝင်းတင် ထင်...
စစ်အစိုးရ ဖိအားကြောင့် လားဟူပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ တောပြန...
လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းခဲ့သူ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်ေ...
ရထားလမ်း ဖေါက်လုပ်ရာတွင် ဒေသခံ အာဏာပိုင်များက ခေါင...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ July,29th,2009
ဒေါ်စုအမှု ၃၁ ရက်နေ့ အမိန့်ချမည်၊ အဆိုးဆုံးအတွက် ပြင...
ကြံ့ဖွံ့ ဦးဌေးဦး ဂျပန်သွားဖွယ်ရှိ
လှပတဲ့ ပန်းရိုင်းတွေ မရှူရှိုက်စေချင်
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ July,28th,2009
အမေရိကန်က အာဆီယံကို ခါးပိုက်ထဲထည့်ရန် ကြိုးပမ်းဟု ...
စစ်အတွေးအခေါ်- အနုမြူ လက်နက်နှင့် နအဖ လှိုဏ်ခေါင်း စ...
သံတမန်ကားများ အင်းစိန်ထောင် တရားခွင်မှ ပြန်လည်ထွက်...
မူဆယ် (၁ဝ၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင်တရားမဝင်ကုန်ပ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ July,27th,2009
စစ်တွေမှ ဆန်ဆိုင်များ ဆန်ကုန်သည်အသင်း မ၀င်လျှင် ရေ...
ထမင်းဆီဆမ်း၊ ရုပ်ဝါဒနှင့် ဟမ်ဘာဂါယဉ်ကျေးမှု
ပလက်ဝမြို့နယ်က လူငယ်များကို စစ်တပ်ထဲဝင်ရန် အတင်း စ...
သီးသန့် ခုံရုံးနဲ့ သီးသန့် ဥပဒေ
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ July,26th,2009
ပဌာန်းရွတ်ဆုတောင်းပွဲကို အာဏာပိုင်များ နှောင့်ယှက်...
၀ တပ်ထွက် နှင့် ဗျူဟာမှူးပေါင်း၍တာချီလိတ်လယ်သမား လယ...
မြန်မာနိုင်ငံမှ စစ်သား ၃ ဦးပျောက်ဆုံးနေ
၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွှေးကောက်မတိုင်မှီ ချမ်းသာရေး နအဖ အာဏ...
နအဖ စစ်အစိုးရ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တရားစီရင်ရေး...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ July,25th,2009
(၁၀) သိန်းလာဘ်ယူကာ ဒီဂျစ်တယ်ဖုန်းလိုင်းသစ်များ လုပ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ဆုတောင်းသူ အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံးချိန်းနေ့ အားပေးသူများ စုစည်...
တောင်ပိုင်း SSA တပ်ဖွဲ့ အား ထိုးစစ်ဆင်ရန် ဒကစမှူး အ...
အ၀ိုင်းမှ သုံးထောင့်သို့ ပြောင်းခ ကညန မှ ၆၁၅၀၀ ကျပ...
ဗန်းမော်ခရိုင် ခယကအဖွဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် ဝင်စ...
နအဖတပ်များ ၀င်ရောက်မည့်သတင်းကြောင့်ဒေသခံများ ထိုင်...
ရမ်းဗြဲဥက္ကဌ အကောက်ကြမ်း၍ လူထုများ ဒုက္ခရောက်
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ July,24th,2009
မြန်မာစစ်အစိုးရ တလလျှင် ကလေးစစ်သားလေးရာခန့် စုဆောင...
ဗန်းမော် စစ်ဗျူဟာမှူးတဦးကို ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးနေ
မန့်ပန်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ ဒေသခံလူငယ်များ အဓမ္မကောက်ယြူ...
မွမ်းမံသင်တန်း (၁) လ တက်ရုံဖြင့် ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်ရ...
တပ်တွင်းက နေရာယူမှု ပြဿနာနဲ့ ဆက်ဆံရေးအခက်အခဲများ
မြန်မာစစ်အစိုးရမှ ထိုးစစ်မစခင် ကေအန်ယူမှ တပ်သားစုေ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ July,23rd,2009
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံး ဖမ်းဆီးမှု ရန်ကုန်တွင် လူပြော...
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှု အခြေအနေအစီရင်...
ဂျူလိုင်လလယ် SSA – စစ်အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲ၌ ဗိုလ်ကြီ...
မြန်မာရေတပ် သင်္ဘောများမှ ငွေကောက်ခံသဖြင့် ခရီးသွာြး...
ရထားလမ်းဖောက်ရန် ရွာသားများ လယ်မြေသိမ်းခံရ
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ July,22nd,2009
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေး...